Momba anay - Linhai Qisheng Rubber and Plastic Product Co., Ltd.
Linhai Qisheng Rubber and Plastic Product Co., Ltd., miorina ao amin'ny faritry ny indostria Youxi, Linhai, Zhejiang, dia 15 km miala avy any Ningbo-Taizhou-Wenzhou
fivoahana amin'ny làlambe ary 8 km miala ny làlambe Taizhou-Jinhua misy fidirana fitaterana mety.
Linhai Qisheng Rubber and Plastic Product Co., Ltd., miorina ao amin'ny faritry ny indostria Youxi, Linhai, Zhejiang, dia 15 km miala ny làlambe Ningbo-Taizhou-Wenzhou ary 8 km miala ny làlambe Taizhou-Jinhua misy fidirana mety amin'ny fitaterana. Niorina tamin'ny taona 1999, Linhai Qisheng manarona velaran-tany 18000㎡ ary faritra fananganana 13000 ㎡. Ny fahaizan'ny famokarana isan-taona isan-karazanyfantsona dia mihoatra ny 6 tapitrisa. Hatramin'izao, Linhai Qisheng dia manana mpiasa 170 mahery, ao anatin'izany ny teknisiana injeniera 32.
Linhai Qisheng dia manana andiana famokarana mandroso, andrana ary fitaovana any amin'ny laboratoara. Ny vokatra lehibe anananay dia misy fantsom-bary vita amin'ny fantsom-bary, fantsom-bozaka vita amin'ny lasitra, fantsom-boaloboka, fantsona fluorosilôna sy vokatra hafa mitohy, ampiharina betsaka amin'ny sehatry ny kamio, fiara fitateram-bahoaka, fiara mpandeha, fiara injeniera, fiara fiompiana, fiara miaramila sns .. voaray any amin'ny faritra Sina, Eoropa ary Amerikanina miaraka amin'ny fanitarana laza sy tsena tsy tapaka. Efa ela i Linhai Qisheng no mamatsy ny Dongfeng Motor Corporation, AGCO Agriculture, JCB ary ny orinasa hafa ary nahazo ny fiderana iraisan'izy ireo.
Linhai Qisheng dia nifantoka manokana tamin'ny kalitaon'ny vokatra. Miaraka amin'ny ekipa efa za-draharaha sy rafitra fanaraha-maso kalitao tena tsara, nahazo mari-pankasitrahana IATF 16949: 2016 i Linhai Qisheng ary nampihatra izany tamin'ny dingana rehetra tamin'ny famokarana. Ny haavon'ny fitantanana tsy mitsaha-mitombo dia mametraka fototra mafy orina ho an'ny fitoniana ny kalitaon'ny vokatra. Hanamafisana ny fikarohana sy ny fampandrosoana siantifika, hanatsarana ny fahafahan'ny fanavaozana ara-teknolojia sy ny fifaninanana eo amin'ny tsena, ary hiantohana ny fampandrosoana maharitra ny orinasa, Linhai Qisheng dia nanangana Technology Center mandritra ny 6 taona ary nomena azy ho orinasa teknolojia avo lenta sy orinasa miorina amin'ny haitao Zhejiang . Tamin'ny taona 2020, Linhai Qisheng dia nahazo mari-pankasitrahana 20 Utility Model Patent,
Eo ambanin'ny filozofian'ny orinasa "ny hosotra rehetra dia hatao tsara indrindra ho an'ny mpanjifa", manasa am-pahatsorana ireo mpivarotra manerantany hiara-hiasa aminay sy hampiroborobo ny fampandrosoana iraisana.